कुनै अर्को जातिको विरोध गर्न जातिय संस्था खोलिएको होइन-कुलदीप मगर, अध्यक्ष, मगर संघ अमेरिका
मगर संघ अमेरिकाका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् कुलदीप राना मगर । डिभी परेर अमेरिका पुगेका रानामगर त्यो भन्दा अगाडि काठमाण्डौंबाट प्रकाशित हुने राजधानी दैनिकमा काम गर्दथे । स्नातक पास गरेर मास्टर पहिलोवर्ष अध्ययन गर्दागर्दै अमेरिका हानिएका उनै मगर हाल मगर संघ अमेरिकाको अध्यक्ष रहेर मगर समुदायको हितमा काम गरिहेका छन् ।
प्रवासमा जातिय संस्था खोल्नुको औचित्य र उद्धेश्य बारे बताउँदै प्रवासमा रहँदा जातिय संस्था खोल्नु भनेको अर्को जातको विरोधका लागि नभएर आफ्नो समुदायको हित तथा त्यसमा पनि विशेषत नयाँ पुस्तालाई आफ्नो मातृ संस्कार र संस्कृति सिकाउनका लागि संस्था स्थापना गरिको बताउने उनै मगरसँग संसारन्युजले गरेको छोटो कुराकानी
अमेरिका कस्तो लाग्यो ?
अमेरिका सिस्टममा चल्न देश भएको र कामलाई अत्यन्तै सम्मान गरिन्छ । टाइम टु टाइम काम गर्नुपर्दछ । अर्कोकुरा नेपालीमा पनि एकता छ । यस्तो गर्नुपर्यो भन्यो भने सबै मिलेर लागि पर्छन् । त्यस्तै नेपालमा सामाजिक काममा जति सक्रिय भएर लाग्यो त्यहाँ पुगेपछि त्यति सक्रिय हुन मन नहुने पस्थिति पनि आइपरेको मैले पाएको छु । त्यस्तै नेपाली समुदायमा कमाउन गएको हुनाले त्यहाँ दुःख गरेर पनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने राम्रो सोच सबैमा भएको पाएको छु । नेपालीमा मेहनती बानी हुन्छ । के काम गर्यो भन्दा पनि काम गरेको छ कि छैन भन्ने प्राथमिकता अमेरिकामा हुन्छ । देशको माया र संघ संस्थामा संगठित हुनुपर्छ भन्ने राम्रो सोच रहेको पाएको छु ।
मगर संघ कहिले गठन भएको र यसले गरेका कामहरु के के हुन् ?
मगर संघ अमेरिका २००४ मा स्थापना भएको हो । अमेरिकामा भएको मगरहरुलाई संगठित गर्दै आपसी सदभाब र भैपरी आऊने समस्याको समाधान र नेपालमा हुने प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिकरूपले उपचार गर्न नसकेको व्यक्तिलाई आर्थिक सहायोंग लगायतका सामाजिक काममा सक्रिय हुँदै आएको छ । नेपालमै पनि संघ संस्थामा आवद्ध हुँदै सामाजिक काममा चासो दिने गरेकाले त्यहाँ पुगेको केही समयमै मगर संघमा आवद्ध भए । २०१५ मा म मगर संघ अमेरिकाको केन्द्रीय सदस्य भएको थिए । त्यतिबेला मगर संघ अमेरिकालाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाए । सांगठानिक विस्तारमा मगर संघमा केही कमकमजोरी रहेको जस्तो लाग्यो । नरेन्द्र थापा, जो विद्यार्थी कालदेखि हामीसँगै थियौं । उहाँसँग मिलेर संस्थालाई अगाडि बढायौं । त्यो भन्दा पहिले म जनजाति महासंघ अमेरिकाको पनि कोषाध्यक्ष भए ।
मगर संघ अमेरिकाको गतिबिधिहरु के कस्ता भइरहेका छन् ?
म केन्द्रीय समितिको सदस्य हुँदा हामीले बाल्टीमोर र न्युयोर्कमा च्याप्टर समितिलाई बिस्तार गरेका थियौं । त्यसलाई म अध्यक्ष भइसकेपछि पूर्णरुपमा संस्थागत गरेका हौं । त्यस्तै टेक्सास र न्युजर्शी, च्याप्टर गठन गरेको छौ । त्यस्तै कनेक्टिकट, क्लोराडो, लस एन्जल्स सानफÞ्रांसिस्कोमा पनि गठन गठनको प्रकियामा छौं । अहिलेसम्म ४ वटा भइसकेको र अब १० वटा पुर्याउनेमा छौं । हामी नेपाल मगरसंघ सँगै जोडिएर सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दैछौं ।
पछिल्लो पटक विदेशमा जातिय संघसंस्थाहरुको वृद्धि भइरहेको छ के त्यो उचित हो ?, जिल्ला, तथा गाउँबाट संगठित भइरहेको पनि छन् नि जातिय नै चाहिन्थ्यो र ?
जातिय संस्था खोल्दैमा कुनै अर्को जातिको विरोध होइन । आफ्नो जाति र मातृभाषाको सम्मान पनि हो । प्रवास तथा स्वदेशमा दुवैतिर जातिय संस्था नितान्त आवस्यक छ । किनकी, हिजो म सिन्धुलीमा जन्मिए । म सिन्धुलीमा रहँदा सम्म हाम्रो मगर भेषभुषा के हो ? हाम्रो संस्कृति के हो भन्ने कमै थाहा थियो । म मगर हुँ, मलाई मगर भाषा बोल्न आउँछ । मेरो संस्कार संस्कृति के हो भन्ने काठमाण्डौंमा आएर बढी बुझे । त्यसपछि अझ बढी विदेशमा आएर बुझे । अमेरिका पुगेपछि त झन आफ्नो मातृ संस्कार र संस्कृतिको महत्व महसुस गरे । जातिय संस्थाले अर्को जातिको विरोध गर्यो । जातिय संस्था खोल्नु नराम्रो भन्नेमा मेरो विमति छ । कतिपय सामाजिक कार्यमा अन्य संस्था भन्दा पनि जातिय संस्था अगाडि आएको पाएको छु ।
जनजातिहरुको खुला हृदय र समान व्यवहारको संस्कृति भएको हुनाले पनि उनीहरु सबैलाई सहयोग गर्न अगाडि बढ्छन् । न्युयोर्कमा पनि धेरै नेपाली संघ संस्था छन् । तर, अन्य संस्था भन्दा पनि जनजाति संस्थाहरु व्यवस्थित र सक्रिय रहेका छन् । नेपालमा मगर भाषा र भुषा के हो भनेर नजान्नेहरु र नयाँ पुस्तालाई पनि आफ्नो मातृसंस्कृतिको बारेमा बुझाएको छ जस्तो लाग्छ । तपाइ पनि देख्नुहुन्छ संसारका धेरै देशमा जहाँ नेपाली पुगेका छन् उनीहरुले आ–आफ्नो मातृ संस्कार र संस्कृति जिवन्त राख्न र नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न लागि परेका छन् । हामीले त्यहाँ माघे संक्रान्ति मनाएका छौं, मगर संघ स्थापना दिवश, भूमे पर्ब, लखन दिवस मनाएका छौं । हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई लिएर हामीले आफ्नो समुदायलाई प्रशिक्षित पनि गराइरहेका छौं । पहिले मगर संघ अमेरिकाले दोहोरी कार्यक्रमहरु गर्दै आएको थियो । सन् २०१३–०१४ देखि हामीले मगर संस्कार र संस्कृतिका बारेमा सबैलाई बुझाउँदै नेपाल सरकारले मगरको राष्ट्रिय पर्ब घोसना गरेको सबै मगरहरूलाई सूचित गराउदै हामीले अमेरिकाका प्रत्येक राज्यमा माघे संक्रान्ति मनाउदै आएका छौं । साथै नेपालका मगर समुदायको हितको लागि पनि हामीले सक्रिय रुपमा काम गदै आएका छौं ।
मगर समुदायको विकासका लागि हामीले के गर्दा राम्रो होला ?
मगर समुदायका युवाहरुलाई कसरी अगाडि ल्याउने, तथा राज्यका विभिन्न तप्का र तहमा पहुँच पुर्याउनका लागि नेपाल मगर संघले पनि एक किसिमको सहकार्य गर्दै आएको छ । अलिकति हामीमा कसैले गरेको काममा विस्वास गर्न सक्तैनौं । मैले नै जश लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि छ । मगर नेतृत्वमै पनि अलिकति संस्कारको कमी हो कि जस्तो लाग्छ । आफै मगरहरुको टाउकोमा टेकेर राजनीतिक दलसँग बार्गे्निङ गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । मगर जातिलाई राज्यको विभिन्न अंगमा कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा ध्यान नदिएको पनि देखिन्छ । तर, पछिल्लो समय लोकसेवा लगायतमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान प्रतिष्ठानले विभिन्न जातजातिका युवाहरुलाई लोकसेवाका निःशुल्क कक्षाहरु उपलब्ध गराएर सहयोग गरेको छ त्यो पनि राम्रो कुरा हो ।
मगर संघबाट ज्ञानेन्द्रजी, गणेश ठाडाजी अमेरिका जानुभएको थियो । त्यतिबेला पनि लोकसेवामा मगर समुदायका युवाको पहुँच कसरी बढाउने भन्नेमा छलफल भएको थियो । त्यसका लागि मगर संघ अमेरिकाले लोकसेवाका लागि तयारी गरिरहेका देशभरका मगर युवाका डाटा कलेक्सन गरेर केही सेलेक्टेड ५०–६० जना युवाहरुका लागि लोकसेवा तयारीको लागि मगर संघ अमेरिकाले सहयोग गर्ने योजना पनि बनाएको छ ।यहाँ कस्तो बताबरण बन्छ,कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ नेपाल मगर संघ तथा मगर अभियन्ताहरुसंग सुझाव लिइ काम आगाड़ी बढाउने छु ।
अन्तमा बिश्वको मगरहरू एक भई मगरहरूलाई आर्थिक, राजनैतिक र शैक्षिकरूपले समुन्नत बनाउन सबै मगर अभियन्ताहरूलाई आग्रह गर्दै । मेरो बिचार राख्ने अबसर दिनु भएको संसारन्युजलाई हार्दिक धन्यबाद ज्ञापन गर्दछु ।